iOS 11 ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti utaure zvakananga nemakambani | IPhone nhau
Nekufamba kwemazuva, takawana nhau zhinji pamusoro peIOS 11 yakavanzwa kana, zvirinani, zvisina kutaurwa naTim Cook nevashandi vake panguva yekupedzisira yekutanga hurukuro yeWorldwide Developer Conference 2017. Uye zvechokwadi, chiitiko chacho hachina kugona kupera usina nyowani ficha yeMessage app izvo zvaizotisiya isu tichifunga mukati mevhiki ino.
Apple inoda vashandisi kuti vakwanise kutaurirana zvakananga nemhando uye izvi, zvakasanganisira a Bhizinesi ChatChinhu chakafanana ne "bhizimusi chat" iyo inofambisa kudyidzana pakati pekambani 'vatengi vatengi nevashandisi.
1 iOS 11 ichabatsira kuvandudza sevhisi
2 Bhizinesi Chat inoshanda sei?
3 Makambani anokwanisa kugadzira avo ekuwedzera
iOS 11 ichabatsira kuvandudza sevhisi
Mune dzino nguva umo makwikwi pakati pemakambani asvika pamwero usingafungidzirwe mukati mehurongwa hwehupfumi hwakadzama uye zvichitarisirwa shanduko, iyo hondo pakati pemakambani haicharwi zvese zviri zviviri pamitengo uye kushandira vatengi.
Hondo yekurwira zvirinani kushandirwa kwevatengi rave rimwe rematanho ekuronga echiratidzo chero chipi zvacho chinoshuvira kubudirira; kushandiswa kwakaipa kwevatengi kunogona kureva kurasikirwa kwako uye pamusoro pazvo zvese, "mukurumbira wakashata" uyo unodhura zvakanyanya kuti udzoke kumusoro. Vatengi varipo vanoda kugona uye nekukurumidza, uye izvi zvinosanganisira yakasanganiswa omnichannel kana multichannel chiitiko chinotibvumidza kuyedza kugadzirisa kusahadzika kwedu uye / kana matambudziko kuburikidza neanodikanwa chiteshi, uye izvo zvinototitarisira kuburikidza neyakajeka proactivity: kufona nhare, IVR masevhisi, email ndeimwe yemakiteshi uye, chokwadika, imwe yacho iri kutumira mameseji.
Nekudaro, Apple yaida "kukweretesa ruoko" kumakambani, asiwo kune vatengi, uye Ne iOS 11, mabhenji achave nechairi nzira yekutaurirana nevatengi vavo uye vashandisi, Meseji.
Mupfungwa iyi, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakaratidza panguva yekuratidzira kwevagadziri kwakaitika Chishanu svondo rapfuura muhurongwa hweWWDC 2017, mamwe mashoko nezve nyowani Bhizinesi Chat chinongedzo icho chinosanganisira Meseji muIOS 11.
Kutenda kune ino "Bhizinesi Chat", Makambani kana mabhureki anogona kuisa avo vatengi vevashandi kusangana nevashandisi, zvakananga uye vakazvimiririra kubva kune dzimwe hurukuro kana hurukuro.
Bhizinesi Chat inoshanda sei?
Sezvaunogona kufungidzira, mashandiro anomira kuve nyore. Mushandisi anogona tumira meseji yekutanga kuitira kuti utange hurukuro nekutepa inoenderana icon inoonekwa padyo nemazita ekambani muSotlight, Siri, uye Mepu mitsva yekutsvaga, kana nekutarisa QR kodhi ine yako iPhone kana iPad kamera.
Chiito chiri pamusoro ichi chinobva chavhura iyo Messages app, uko iyo kambani inogona kupa zvigadzirwa zvekutengesa, kupa sarudzo kusarudza nguva dzekugadzwa, kutumira zvinotevera zviziviso kune vatengi maererano nemaitiro ekubvunza kwavo, uye mamwe masevhisi ekuwedzera.
Iyi sarudzo nyowani haingobvumidze kutaurirana pakati pekambani nevatengi asi zvakare, kuburikidza neMessage icons kana QR kodhi, ruzivo rwakananga runogona kupihwa iyo inosanganisa mushandisi kune imwe nzvimbo yenzvimbo kana chigadzirwa chakabatana kana sevhisi, kuitira kuti upe kutarisira kuri nani. Muchokwadi, izvi zvinotopa kambani nemutauro wevatengi, ruzivo nezve account yavo yevatengi senge mirairo yapfuura kana mibvunzo yekuchengetedza, nezvimwewo zvichibvumira kutaurirana kuti kuve nekukurumidza uye kunyatsoita basa.
Bhizinesi Chat inosanganisirawo chinhu chitsva chinoita kuti zvive nyore kune vatengi ku sarudza nguva yekusangana, anosarudza kusarudza zvinhu zviri kutengeswa, uyezve, sarudza Apple Bhadhara senzira yako yekubhadhara.
Uye kuitira kuti hurukuro ikurumidze uye iwedzere kuyerera, chirevo chekufungidzira bhaa chinokwanisa kupa ruzivo rwemunhu sema kero evashandisi, manhamba efoni, nezvimwe, kana iwe uchida kuvagovana nekambani iri kutaurwa.
Makambani anokwanisa kugadzira avo ekuwedzera
Uye kuitira kuti makambani agone kupa yakasimudzira vatengi sevhisi yakakodzera kune avo maitiro, Apple ichakutendera iwe kukudziridza yako wega tsika yekuwedzera eMessage. Mumuenzaniso unoratidzwa neChishanu (pazasi pemitsara iyi) tinogona kuona kuti zvingave zvakaita sei kusarudza chigaro panguva yekuchengetedza ndege.
Zvakakosha kuziva kuti makambani anokwanisa chete kutumira notices kune vashandisi avo vakambotanga kutaurirana; mushure meizvozvo, mutengi achakwanisa kudzima zviziviso zvemashoko ari kuuya, kukanzura hurukuro yese uye kutovharira kambani.
Bhizinesi Chat Izvo zvakagadzirwa kukwikwidza zvakananga neakanyanya akafanana masevhisi atove aripo kuburikidza neTwitter, Skype, WhatsApp kana Facebook Messenger, zvisinei, Apple ine mukana wekuipa seyakazvarwa basa muIOS 11Mune mamwe mazwi, ichauya isati yaiswa-mukati mumatemu matsva uye musystem nyowani, ndosaka inotarisirwa kwazvo kutora uye kushandisa mwero kunotarisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti utaure zvakananga nemakambani
Kunyangwe vese vashandisi veIOS vakashandisa basa iri, zvichave zvakaoma, kunyanya nekuti pakutanga pachave nemakambani mashoma anotsigira basa iri, kunyanya iwo ari muLatin America.
Yakanaka kwazvo hebichii.
Ini ndinofunga zvakanaka, nekuti makambani anofarira kuve nehukama hwakanangana nevashandisi, uye vashandisi vanofarira kusave nevapindiri vazhinji. Ini ndinoona ichifadza kwazvo pakukurukurirana uye neruzivo rwezvigadzirwa uye mhinduro kumatambudziko zviri nyore.
Iyo App Store inokupa iwe FRAMED, bhuku rakajeka repuzzle ye iPhone ne iPad